Global Voices teny Malagasy · admin – Jona 2019
admin · Jona, 2019
Lahatsoratra farany an'i admin tamin'ny Jona, 2019
Mediam-bahoaka28 Jona 2019
Dika20 Jona 2019
Ao amin'ny fiarahamonina mihamitsofoka hatrany ao anaty fanatontoloana, matetika isika ao anaty toeram-piasana tsy voatery miteny anglisy avokoa ny olona ao. Ho an'ireo tsy mpiteny anglisy, matetika fanamby goavana ny fifampiresahana sy ny fahazoana ny hevitr'izy ireo.
Translator Newsletter: Fiteny madinika, Sary-sy-soratra sy maro hafa!
Inona no fomba tsara hanombohana ny herinandro raha tsy amin'ny tsikitsiky kely?
Translator Newsletter: Alsimian'ny Haiteny, Fitenin-jatovo sy ny hafa!
Dika19 Jona 2019
Rehefa mivarotra votoaty ho an'ny mpihaino manerantany, zava-dehibe ny herin'ny fandikan-teny. Arakaraka ny maha-mpandika teny tsaratsara kokoa anao, no hinoan'ny mpihaino kendrenao fa mijery votoaty orizinaly ho azy ireo amin'ny fitenin-drazany izy ireo.
Translator Newsletter: Rafitry ny atidoha, Famantarana hetsika sy maro hafa!
Amin'ny maha mpandika teny antsika, dia matetika isika miasa any an-trano isika ary tsy manana fahafahana betsaka hifandray amin'ireo namana matihanina amin'ny fiteny samihafa. Globalme nanam-potoana hanangonana ity lisitra misy ireo hetsika ho avy any amin'ny faritra manerantany. Jereo izany raha misy any amin'ny manodidina anao!
Dika18 Jona 2019
Amin'ny maha zanaky ny mpifindra monina lehibe tao New York City, lehibe tamin'ny fandikan-teny ho an'ny ray aman-dreniko sy ny raibe sy renibeko aho (ary mbola manao izany andraikitra izany indraindray amin'izao fotoana izao). Saingy inona koa no momba ny andraikitra amin'ny maha mpitari-dalana ny ray aman-dreny ao amin'ny tranon'izy...
Translator Newsletter! Saritanin'ny Fiteny, Fandrindrana sy ny maro hafa!
Mametraka sarintany sy kisarisary fito mahafinaritra ny Washington Post mba hanampy antsika hijery ny fitenin'izao tontolo izao sy ny fomba fahasamihafantsika tokoa amin'ny maha-olona antsika.
(Tafaverina izahay!) Translator Newsletter: Webinars, ny tsy mety adika sy ny sisa maro hafa!
Saingy raha misy fiantraikany amin'ny fomba fijerin'ny hafa anao ny miteny fiteny samihafa, dia mety hisy fiantraikany amin'ny fomba fijerinao an'izao tontolo izao ihany koa ve?